China kọfị igwe akụrụngwa ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | Chapman
✭ Akụkụ plastik a bụ akụkụ bụ isi nke igwe kọfị capsule, ọ bụkwa akụkụ bụ isi nke igwe kọfị capsule.
✭Ihe eji eme ihe maka akụkụ plastik a bụ PA66 + 45GF, enwekwara isi akụkụ plastik atọ dị mkpa iji jikọta akụkụ plastik a. Akụkụ igwe na-agbagharị na mkpofu nke kọfị kọfị bụ ihe a na-apụghị ịkewapụ na akụkụ plastik a.
✭ Uru ya adịghị mfe nrụrụ, ezi nkwụsi ike, nkenke dị elu, iji hụ na igwe kọfị kwụsiri ike n'oge ọrụ ma belata mkpọtụ.
✭Nke a ebu bụ anyị ụlọ ọrụ mmepụta ebu, nke tumadi na-enye plastic akụkụ ọrụ maka anyị kọfị igwe emepụta. Ike imepụta ihe eji ebu ihe bu 800 kwa ubochi.
Akpụzi mba. CPM-150229
Ihe Plastic PA66 + 45GF
Akụkụ akụkụ 120.61g
Nkebi nke 155 * 85 * 52 mm
Ebu ebu 450 * 400 * 421mm
Aha Aha Ngwa kọfị
Ndị na-agba ọsọ ọnụ ụzọ ámá
Etiti oge Daysbọchị 45
Ebu Cycle Oge: 38 nke
Igwe kọfị kacha mma pụtara na ịkwesighi ịmegharị na ịzụta kọfị kọfị ma gwerie ha. Ee, nke ahụ bụ ihe a na-enyo enyo maka ụfọdụ n'ihe metụtara ego na ihe mkpofu, yabụ na anyị agaghị akpọ onye kachasị kọfị kọfị kacha mma kọfị, mana n'aka nke ọzọ, kọfị kọfị dị mma. Woah, ezigbo njikọta.
Igwe kọfị kọfị na-arụpụtakwa nsonaazụ na-agbanwe agbanwe nke siri ike siri ike ịnweta site na iji espresso igwe na ọtụtụ ụdị bean-to-cup. Site na igwe eji eme ka ị banye na pọd ahụ, pịa bọtịnụ ahụ wee pụta na iyi nke ike okike siri ike-topped ọla edo ojii ọ bụla dị ka nke ikpeazụ.
Akụkụ plastik a bụ akụkụ dị oke mkpa nke igwe kọfị Capsule, nke na-eburu igwe ọrụ kọfị niile. Ejiri ọrụ kachasị ike nke nkwụsi ike na nduzi.
Nke gara aga: Fan azụ mkpuchi
Osote: Obere nkenke servo sterịn gia mkpuchi